Waa maxay Maalgelinta Mawduuca? Sida ay u Shaqeyso, Faa'iidooyinka iyo Qasaarooyinka
Bogga ugu weyn Waa maxay Maalgelinta Mawduuca? Sida ay u Shaqeyso, Faa'iidooyinka iyo Qasaarooyinka
Kuwo badan sida aniga oo kale, markasta oo aan la kulmo erayga “mowduuc” sida ku jirta maalgashiga Thematic, tababarkeyga sawir-gacmeedka sida juqraafi-deegaan ka hor intaanan ku biirin adduunka maaliyaddu waxay u bilaabmaysaa sida ay ugu dhacdo dad kale oo badan markay la kulmaan erayo gaar ah .
Sida ay ugu jirto sawir -gacmeedka mowduucan, sidaas oo kale ayay ku tahay maalgelinta mowduuc ahaan; farqigu wuxuu ku jiraa arjiga.
Sawir -gacmeedka mowduucyada leh, khariidadaha mowduucan waxaa lagu kala saaraa tirakoob, midab, astaan ​​dhibic, choropleth, go'doon, iwm.
Maalgelinta mowduucyada leh, waxaa jira mowduucyo badan oo qofku fahmi karo - kobcinta teknolojiyadda, kala -soocidda, kobaca dhaqaalaha, iwm.
Maqaalkani wuxuu ka hadlayaa maalgelinta mowduucyada, sida ay u shaqayso, faa'iidooyinka iyo qasaarooyinka, iyo sidoo kale waxyaabo kale oo aad u baahan tahay inaad ogaato.
Waa maxay maalgelinta mawduucan?
Tani waa abuurista faylalka ama qaybo ka mid ah iyada oo la isu geeyo koox shirkado ah oo ku hawlan isla waaxyaha ama qaybaha hoose.
Qaybaha uu maalgashaduhu rumaysan yahay inay si ka wanaagsan sidii caadiga ahayd u ​​qaban doonaan ama rajada mustaqbalkoodu aad uga badan tahay celceliska suuqa soo noqoshada marka la maalgashado.
Tani markaa fikrad ahaan waxay ka dhigan tahay taas waa inaad suuqa wax ka baratay iyo waaxda muddo dheer oo ku filan si ay u arkaan waxyaabo aysan dadka kale arkeyn ama ay leeyihiin aqoon aysan dad badan u janjeerin inay yeeshaan.
Shirkadda ugu weyn ee maalgashiga adduunka Blackrock Inc wuxuu qeexayaa maalgashiga mowduucan sida "hab ku wajahan isbeddellada muddada fog ee la saadaalinayo halkii ay ka ahaan lahaayeen shirkado ama waaxyo gaar ah, oo u saamaxaya maalgashadayaasha inay helaan qaab-dhismeed, wareegyo hal mar ah oo beddeli kara warshado dhan."
Blackrock oo ah shirkad maalgashi waxay diiradda saareysaa 5 megatrends, kuwaas oo ah magaalaynta deg -degga ah, isbeddelka cimilada, iyo yaraanta kheyraadka, beddelidda awoodda dhaqaale, iyo isbeddelka tirada dadka iyo bulshada - kuwaas oo dhammaantood ay horseed u yihiin horumarka farsamada.
Noocyada mawduucyada maalgelinta
#1 - Mawduucyada xilliyeed
Mawduucyada xilliyeedku waa mawduucyo leh wakhti gaaban oo guud ahaan si joogto ah u dhaca.
Waxay ka dhalan karaan isbeddellada siyaasadda gudaha ee shirkad, wax-ka-beddel meertada meheradda, ama wax saamayn gaaban leh.
Mararka qaarkood mawduucyadan waa kuwo la saadaalin karo lana filayo laakiin ma raagayaan waqti ku filan laakiin waxay sii jiraan waqti ku filan si loo saxo ama loo barokiciyo waxyaabaha sida xumbo kayd ah.
Tusaalooyinka mawduucyada xilliyeedku waa qiimaynta hantida, isbeddel la'aanta, dulsaarka, iyo qiimayaasha lacagta.
#2 - Mawduucyada carqaladeeya
Mawduucyada carqaladeeya badiyaa waa mowduucyo waqti dheer ah maadaama ay sii jiri karaan waqti aad u dheer ilaa marxalad mawduuc ah oo marmar saxaya socod ama xumbo.
Mawduucyada khalkhalka leh waxaa lagu abuuri karaa helitaanka tiknoolojiyadda horumarka, daawada, ama xoojinta dhaqaalaha.
Beddelidda tirakoobka dadka iyo dabeecadda macaamilka waxay keeni kartaa mawduucyo carqaladeeya.
Waa maxay isbeddel mawduuc leh?
Si aad si dhab ah u fahanto waxa isbeddel mawduucu yahay, waxaad u baahan tahay inaad fahanto arrinta ku saabsan maalgelinta iyo halista ka -qaybgaleheeda.
10-kii badeecadood ee ay maal-gashadayaashu maal-gashadaan, 9 waxay u badan tahay inay fashilmaan, midna waxay u badan tahay inuu noqon doono mega-hit.
Maalgashadee, maxaa dhacaya haddii sabab uun aadan u maalgelin kan 10aad? Waad luntay, taasi waxay ka dhigan tahay dhammaan lacagtii aad ku bixisay 9 -ka soo hartay inay khasaartay.
Khatarta noocaas ah ayaa ah mid ay maal -gashadayaal badani isku dayaan inay iska ilaaliyaan iyagoo wareegaya oo qaada xeelado badan oo kala duwan.
Isbeddel mawduucu asal ahaan waa waxa uu maalgeliye arko kaas oo ka caawiya inuu saadaaliyo in hantidani ay si ka fiican u qaban doonto kuwa kale.
Dulucdu waxay ku saabsan tahay isbeddel, markaa su’aashu waxay tahay “maxaa is -beddelaya?” Ma sheegi kartaa? Ma arki kartaa halka mustaqbalku ku wajahan yahay?
Haddii aad awooddo, markaa waxaad u badan tahay inaad naftaada ku kasbato lacag aad u badan adiga oo maalgashanaya shirkadaha tallaabooyinka u qaadaya dhankaas.
Akhri Sidoo kale: Sida Loo Helo 800 Dhibcaha Dhibcaha 2022 | Tilmaan Fudud
Noocyada isbeddellada mawduucyada ah
Waxaa jira noocyo badan oo ah mowduucyo mowduucyo ah waxaana la raacaa iyadoo lagu saleynayo aragtida, xaqiiqda suuqa, iyo waxqabadka.
Iyagu waa megatrends, macroeconomic, iyo isbeddelada dhaqaalaha -yar.
#1 - Megatrends
i - Horumarka farsamada
Maaddaama tiknoolijiyada ay sii waddo furitaanka suuqyo aan hore loo shaacin, iyo iyada oo la ogyahay in tiknoolijiyada ay si weyn u sii kici doonto iyadoo waddo horumarka baaxadda leh ee dhinacyada tiknoolajiyadda iyo wixii ka dambeeya.
Waxay macno samaynaysaa oo kaliya in tani ay tahay isbeddel waana mid ay tahay in maalgashadayaashu ay maalgashadaan.
ii - Isbedelka cimilada iyo yaraanta kheyraadka
Adduunku cagaar buu noqonayaa taasina ma aha kaftan. Maalgashadayaashu sidoo kale way yaqaaniin, malaha kahor intaan joe celcelis ka ogaan arrintaas.
Teknolojiyaddu waxay sii wadaysaa inay fududeyso in la gaaro himilooyinka adduunka nadiifta ah sidaa darteed maalgashadayaashu waxay aad ugu janjeeraan inay maal gashadaan shirkadaha caawiya dadka inay cagaar noqdaan.
Shirkadaha gacan ka geysta kaxaynta saadaasha ah in marka la gaaro sanadka 2050 tamarta adduunku ay ka iman doonto ilaha qoraxda iyo dabaysha ayaa la maalgelin doonaa.
iii - Tirakoobka iyo isbeddelka bulshada
Tani waa wax badan oo lagu qaadan karo dareenka ah inaad u baahan tahay inaad saxdo saadaashaada. Macaamilku wuxuu u baaba'aa adduunka sida uu yahay taasina waxay la imaanaysaa xoogaa raad ah.
Cimriga dheer iyo hab -nololeedka casriga ahi waxay saamayn doonaan habka wax soo saarka caafimaadka loo soo saaro loona cuno.
Qeybo ka mid ah adduunka, in ka badan 60% dadka ayaa ka yaraan doona 20 sano, waxaana la saadaalinayaa 2030 in la kordhiyo 45% dadka 60+ ah.
Tani waa mawduuc ay maalgashadayaashu ku fuuli karaan haddii ay doortaan shirkadaha saxda ah ee leh badeecadaha saxda ah.
Isbeddellada dhaqaaluhu waa isbeddello saameeya bay'ada-dhaqaalaha ballaaran, oo ay ku jiraan sicirrada sii kordhaya, sicir-bararka, kobaca dabaqadaha dhexe ee suuqyada soo baxaya, ama qaababka ganacsiga adduunka.
Isbeddellada dhaqaale-yar-yar waa isbeddellada ka soo baxa heerka shirkadda, oo ay ku jiraan istiraatiijiyado ku saleysan arrimo ku xisaabtamaya astaamaha shirkadda qaarkood.
Astaamaha sida qaab-dhismeedka maareynta, ama ESG (deegaanka, bulshada iyo maamulka)-cabbirrada nooca, sida matalaadda dumarka iyo heerka shaqaalaha iyo heerka maareynta.
Waa maxay maalgelinta qodobka?
Investopedia waxay sharraxaysaa maalgelinta qodobbada sida “istaraatijiyad ku dooranaysa damaanad -qaadyada astaamaha la xiriira soo -celinta sare.
Waxaa jira laba arrimood oo waaweyn oo horseeday soo noqoshada kaydka, curaarta, iyo qodobo kale: isirro dhaqaale iyo arrimo qaab.
Kii hore wuxuu qabtaa khataro ballaadhan marka loo eego fasallada hantida halka kan dambe ujeeddadiisu tahay inuu sharaxo soo -celinta iyo khataraha ku jira fasallada hantida. ”
Maalgelinta isirku waa hal mawduuc oo ka caawiya ka hortagga halista iyadoo kor loo qaadayo kala -duwanaanshaha.
Dhibaatada kala -duwanaanshaha ee maal -gelinta qodobka ayaa ah inay dhammaanteed noqon doonto wax aan waxba tarayn haddii guulaha la filayo inay ka soo baxaan la lumiyo marka la miisaamayo.
Sidee buu u shaqeeyaa maalgelinta mawduucu?
Maalgashiga mawduucu wuxuu ku shaqeeyaa isku -darka shirkadaha ku jira isbeddel la mid ah oo la rumeysan yahay inay awood u leeyihiin dib -u -soo -noqosho isku -dhafan oo ay ku wada jiraan faylalka iyo maal -gelintooda.
Waa maalgelin sharadaysa mustaqbalka isbeddellada. Haddii aad rumaysan tahay wax ku salaysan waxaad fiirsatay, markaas waxaad dhigaysaa lacagtaada.
Uruurinta shirkado sameeya waxyaabo la mid ah qaybta danta waxaa loo yaqaan mawduuc.
Sida mawjadaha oo kale, maalgelinta mowduucu waxay ku salaysaa kartida shirkadaha ama waddamada ama hanti kasta si ay uga faa'iidaystaan ​​isbeddellada.
Waa maxay faa'iidooyinka maalgelinta mawduucan?
Waxaa aad loogu foogan yahay waxqabadka hantida
Haddii si fiican loo maalgashado, waxay awood u leedahay inay guud ahaan wanaajiso xaaladaha nololeed
Waxay dhiirrigelisaa fikirka maalgashiga horusocodka ah
Waa maxay qasaarooyinka maalgelinta mowduucan?
Sida dhammaan noocyada kale ee maalgashiga, maalgashaduhu wuxuu wajahayaa halista ah inuu lumiyo qaddarka la maalgeliyay.
Inta badan, maalgelinta mowduucu waa ka aragti badan tahay wax ku ool.
Haddii aan si fiican loo fahmin, maalgeliyuhu waa laga tegi karaa isagoo daba ordaya, iyo inta badan goor dambe.
Halkii ay ka ahaan lahayd kala -duwanaansho toosan, maalgashiga mowduucu wuxuu doortaa shirkado tiro yar intii suurtogal ah oo ku jira mawduuc wuxuuna ku daraa faylalka -galka isagoo maal -gelinaya.
Markaa iyadoo kala -duwanaanshuhu ka caawinayo yareynta halista, waxay bixisaa soo -celin hoose marka loo eego marka mowduuc la abuuro oo lacag lagu maalgeliyo dhammaantood.
haddii aad fahantay maalgelinta mowduuc, markaa way fududahay in la dalbado.
Faallooyinka Viraltrend: Viraltrend ma sharci baa mise waa khiyaano?
Faallooyinka Wikibuy: Sharci Mise Qiyaanada Dukaameysiga Onlineka ah? (Capital One)
Suuqa saliida wuxuu noqon karaa mid aad u jahawareersan maalgashadayaasha khibrada leh iyo kuwa cusub labadaba isbeddelka sicirka ee joogtada ah.…
Dad badan ayaa ka warqaba in lahaanshaha hadafyada maaliyadeed ee muddada-dheer ay weyn tahay. Laakiin sidee ku saabsan la -kulanka hadda…
Lahaanshaha guryaha waxay u muuqdaan kuwo fudud ilaa laga gaadhayo wakhtiga la helayo ka faa'iidayste. Hadda waxaad ogaataa inaad…